Reader Kuwana Matanho emaNew Blogger | Martech Zone
NeChishanu, Kurume 30, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Zvinotora hushingi kuzvipira kunyora blog. Uri kuzviisa kunze kwewebhu ine chinyorwa chakanyorwa chemafungiro ako nemaonero. Kubuda pachena ikoko kunovhura iwe kuitira kusekwa kwekukasira kana, mushure mekushanda nesimba kwakawanda, nguva yekuremekedza. Mukukosha, iwe wakaisa mukurumbira wako pamutsetse - chero ramangwana mikana yemabasa inogona kuputswa nekanganiso kamwe chete. Zvikuru!
Iwe unogadzira yako blog pa Blogger, TypePad or WordPress (yakakurudzirwa). Wobva wagara wofunga nezve yekutanga blog post ... mazana emazano ari kutenderera mumusoro wako. Unotanga sei? Ndinoudza vanhu kuti vangozviite uye vazvipedze. Ndakatanga ne rant paGomo Dew kushambadzira kwekudya kwemangwanani. Nepositi yako yekutanga, kunze kwekunge uri zita rinozivikanwa, urikutanga ne zero mbiri uye, pamwe, zero zero vaverengi.
Dai ndaiziva chete izvo zvandinoziva izvozvi, anotevera mashoma mapositi anogona kunge anga akatosiyana zvishoma. Handizvidembi nenzira yandakatora, asi zvirokwazvo ndaigona kunge ndakawana vaverengi vatsva nekukurumidza. Ini ndanga ndisiri kutarisisa kune vaverengi, ini ndanga ndichingoedza kujairira kunyora zuva rega rega kana zvakadaro uye kuinzwira iyo. Nzira irinani yandingadai ndakatora ingadai iri yekunyora mhinduro huru kune mamwe mablog mablog. Ini ndanga ndaverenga yakawanda blog ndisati ndatanga asi ndakanga ndisina kujoina muhurukuro. Dai ndakanga ndaita izvo, mamwe mabloggi ne mukurumbira ungadai wakaverenga blog yangu uye ungangodaro wakasimudzira kunyora kwangu.
Zano #1 Pamwe pamwe nezvimwe zvinyorwa zvitsva, nyora nezve zvimwe zvakatumirwa kunze mublogosphere kuti utange kuverenga kwako. Ive neshuwa yekushandisa trackbacks.
Mushure mekutanga zvako zvinyorwa, koka (chiokomuhomwe, kuda, kukumbira, kutyisidzira) shamwari dzako kuti dziverenge nekutaura pane zvako zvinyorwa. Makomendi anokweretesa kutendeseka kune blog nekuti inopa vaverengi zvese pfungwa yezvino fungwa nevaverengi vako nezvesaiti yako uye kuti yako blog yakakodzera kutaura pamusoro payo. Kana iwe uchiziva mamwe mabloggi, vakurudzire kuti vaongorore yako blog iwe uye vakukandire iwe imwe 'yekubatanidza rudo'.
Zano #2 Gadzira mamwe makomendi uye edza kuwana mamwe maratidziro kubva kubloggi aunoziva.
Zvakanaka, iwe wakaenda kune runako salon uye wakatora iyo yakanaka faux hawk kugerwa, zvino ndiyo nguva yekupfeka uye kuratidza dova nyowani! Zvidururire iwe munharaunda uye pasocial bookmarking saiti. Pandakabatsira JD kuvhura blog yake, Nhema MuBhizinesi, Ndakawana JD kujoina MyBlogLog uye ipapo ini ndakatumira blog yake pane akati wandei masocial bookmark saiti, kunyanya StumbleUpon. StumbleUpon haidi chinyoreso chaicho kuti uwane chinzvimbo - unogona kungoisa tsananguro uye mamwe ma tag. StumbleUpon vashandisi vane zvakafanana zvido zvichaita kugumburwa pane yako blog uye vazhinji vanoomerera nekuda kwezvavanofarira.
Zano #3 Tora mukana wemamwe mablogging network uye masocial bookmarking saiti.
Sezvaunoramba uchinyora, ita shuwa ku ongorora zvemukati wako. Izvo zvinokupa iwe nemhinduro yezvinyorwa izvo vashanyi vari kuwana zvakanyanya pamwe nezvinyorwa zvine zvakanyanya kurova. Pamwe nekutora kwako kutarisa kune ako makomendi, ikozvino unogona kuwana mufananidzo wedhairekitori yekutora yako blog zvemukati mukati. Enda nazvo! Lather (suka zvirimo), sukurudza (donhedza marara) uye dzokorora. Ramba uchizviita uye mazana mazana mahure gare hautende kuti wasvika papi.
Zano #4 Lather, sukurudza, dzokorora.
Zano rekupedzisira: Dzivisa kubiridzira uko. Heino mutemo wechigunwe: chero 'Top Blogging' saiti inoda kuti iwe uise bheji, banner, kana chero imwe graphic, gara wakamira kure. Iko hakuna nekukurumidza kugadzirisa kune blog. Mukurumbira zvinotora nguva, kuvaka kuverenga kuverenga kunotora nguva, uye kuvaka kwako 'kuwanikwa' pane injini dzekutsvaga kunotora nguva. Dzivisa chero saiti blogging iyo iri kuzowedzera yako blog chinzvimbo nekuisa iwe graphic pane yako blog.
Zano #5 Dzivisa kuisa magiraidhi pane yako saiti iyo inongoshambadza imwe inokatyamadza blogging aggregator iyo isingape zvisina basa pamusoro pako.
Yakakura Post, Doug.
Kusiya mhinduro dzakanaka ndiyo nzira yakanaka yekuverenga kuverenga - iwe ndiwe wekutanga kupindura pablog rangu, uye ndave ndiri muverengi akatsiga weblog rako kubva ipapo. 😉
Kamwezve zano randinogona kugovana ndere kukupa iwe blog kutarisa kwakasarudzika uye kunzwa - usazviite zvakanyanya kuomarara, zvine njodzi kushandisa akawandisa plug-ins ayo anowedzera anotonhorera maficha. Zvizhinji zvezvinhu izvi zvinotanga kubatsira kana iwe wawana huwandu hwakawanda hwezvinyorwa.
Sezvo Doug akambotaura, iva neimwe mhando yekukurudzira iyo inochengeta vaverengi pane yako blog; mazhinji anouya kuburikidza neinjini yekutsvaga, uye anogona kuverenga chete chete yakatarwa yekupinda. Kana iwe, zvakadaro, ukaratidza zvimwe zvakabatana zvinoenderana panoperera zvaunotumira, vanogona kuramba vakareba, uye dzokera, Zvakare!
Izvo zvinonakidza kuraira! Handina kuziva kuti ndaive wekutanga kutaura nezvako ... izvo zvakanyatsonaka! Ini ndoda kuverenga yako blog!
Anotyisa matipi evatsva mabloggi Doug.
Ini chechipiri zvese zvawanyora.
Imwe imwe zano:
Usakanda mapfumo pasi! Dzimwe nguva zvinonzwa sekunge urikutaura nemadziro emafriji. Usanetseke, vanhu vari kuteerera / kutarisa kunyangwe vasina kupindura. Ramba uripo!
Ingori yangu $ 0.02 🙂
Iyo $ 0.02 yakakosha miriyoni yemadhora, Tony! MaBloggi vanonetsekana kana vasingawani mhinduro zhinji… asi chokwadi ndechekuti 98% kusvika 99% (chaiko… Ndakaverenga zvimwe zvirevo) zvevanhu vanoshanyira bhurogu yako havazombofa vakasiya chirevo. Saka yeuka vanhu vari kuverenga uye urikuita basa rakakura!
Ndiyo marathon, kwete sprint.
Doug, rutsigiro rwako rwave rwakakosha zvikuru uye kunze kwekutungamira kwako ndingadai ndakanetseka. Iyo poindi ndeyekuti, zvinobatsira mukukumbira kuve nemumwe munhu ane ruzivo rwakawanda kuti akubatsire kunzwisisa kuti wakananga kurudyi kana kuzviita benzi. Nezve iyo masosi enetiweki, taura pane mamwe masayiti uye uzviite unozivikanwa Tumira uine frequency uye enda uko kunotakurwa nemoyo wako. Ndine bhizimusi blog asi ndataurawo nezve zvemitambo ans zvematongerwo enyika.
Murairidzi wangu uye wekuteedzera ndiDoug Karr, nhamba 3000 chimwe chinhu chiri munyika. Zvave zvichinakidza kuona blog yake ichiwana vaverengi pamwero unoshamisa.
Ndatenda, JD! Ini ndinofunga iro basa remurairidzi rinogara riri nyore kana iye aine superstar yekushanda nayo!